China V-bhendi clamp Mugadziri uye Mafekitori | Glorex
Iyo mhete yemukati yemukati inokotama uye yakaumbwa neakakosha maitiro. Iyo ine yakasarudzika yakasununguka chitubu dhizaini. Mushure mekunge mhete yemukati yadzvanywa, inotenderera uye yakabatanidzwa kuve nechokwadi chekuti hose inokwanisa kubatirana yakatsiga pasi pekushomeka kwemhepo uye mamiriro akasiyana siyana akaomarara. Inogara-refu uye inogara kwenguva refu.
Carton mabhokisi uye matanda matani.
Izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mumafirita ekuvhara, zvinorema-basa injini dzemagetsi, turbocharging system, discharge system uye maindasitiri ekushandisa inoda flange kubatana (nekukurumidza uye kwakachengeteka kubatana kwe flange).
Iyo inoshandiswa kubatanidza kuburitsa kweiyo turbocharger uye iyo inopedza pombi yemotokari. Kugadzirisa kudzvinyirira kwakasimba kunoita kuti iyo supercharger iwedzerwe uye iyo vibration yakakuvara kana supercharger kushushikana.
Inotevera: Iyo bay-mhando clamp